ဆူးလေစောရများရဲ့အဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆူးလေစောရများရဲ့အဆက်
Posted by thunderstorm on Mar 12, 2013 in Copy/Paste | 11 comments
ကျွန်တော်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်လောက်ကခံရဖူးပါတယ်၊ တစ်ထုတ်ကို၂သောင်းကျော်နဲ့
၄ထုတ်ဆိုတော့၁သိန်းနီးပါး ပါသွားတာပါ၊ ရှေ့မှာတင်တစ်ရွက်ချင်းရေခိုင်းတာဘဲ၊
ဒါပေမဲ့ မျက်လှည့်ကသိပ်ကောင်းတယ်လေ၊ ၀ယ်စရာရှိလို့ ဆိုင်ရောက်ပြီးရှင်းတော့မှ ပက်လက်ကိုလန်သွားတာဘဲ။
ဘယ်သူမှမပြောခဲ့ပါဘူး၊ ရှက်စရာကောင်းလို့ ပါ၊ အခုpostတွေ့ တော့စိတ်နာနာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။
ပုံပါအတိုင်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ရပ်နေတဲ့ ငမိုက်သားများဖြစ်ပါတယ်၊ အနားကဖြတ်သွားရင်
ကျိုက်ထီးရိုးက အချို့ သောအလှူခံများလို အတင်းကြီးလိုက်မေးတတ်ပါတယ်၊ ဒီကောင်တွေကြောင့်
တိုးစိုက်ဆင်းတစ်ခု့ ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခဲရတာ အတော်ကြာပါပါပြီ၊
၊ပြသနာခဏခဏတက်ပါတယ်။ ရဲဆိုတာကလဲသိတဲ့အတိုင်းလေ၊ ရှိရှိသိသိကြီးနဲ့ကိုလုပ်စားနေကြတာ၊
thunder storm has written6post in this Website..
View all posts by thunderstorm →
ဂလိုဗျ.. သာမန် ပိုက်ဆံ တစ်အုပ် ဆိုတာ ..ပိုက်ဆံအရွက် ကို အလျားလိုက်ထားဗျာ။.
ဘယ်ဘက် ကနေကြည့်ရင် ၅ပုံ ၂ပုံ (ဒါမှမဟုတ် ၃ပုံ ၁ပုံ )မှာ သားရေကွင်းနဲ့ စည်းပြီး
အုပ် အဖြစ် စုစည်းလေ့ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံရေဖို့အတွက် ညာဘက် ၅ပုံ၃ပုံ ဒါမှမဟုတ် (၃ပုံ၂ပုံက)
လိမ်တဲ့အုပ်တွေကတော့ ပိုက်ဆံရဲ့ ဘယ်ဘက်ကနေ
ပုံမှန်အတိုင်း ၅ပုံ ၂ပုံ (ဒါမှမဟုတ် ၃ပုံ ၁ပုံ )မှာ စည်းသလို .၅ပုံ ၃ပုံ ဒါမှမဟုတ် ၃ပုံ ၂ပုံ မှာ
နောက်ထပ် တခေါက် ထပ်ပြီး စည်းထားလေ့ရှိတယ်။ သဘောကတော့ ရေဖို့ အလွတ်ထားတဲ့
အခြမ်းက ၃ပုံတပုံ (ဒါမှမဟုတ်) ၅ပုံ၁ပုံပဲ ကျန်တဲ့ သဘော ဆိုပါတော့…။
အဓိက Twist ကတော့ ချုပ်ထားတဲ့အပိုင်းက တ၀က် (၅၀% )ကျော်နေ ဖို့ပါပဲ …။
ဒါမှသာ ပိုက်ဆံတရွက်ကို ၂ခေါက် ခေါက်ထည့်လို့ ရမယ် မဟုတ်ပါလား…။
သည်တော့ အရွက်၁၀၀မှာ ခေါက်ထည့်အရွက် ၁၀ရွက် ထည့်ရင် အရွက် ၉၀တည်းနဲ့
အုပ်မဖြည်ဘဲ ရေကြည့် ရွက်ရေ တရာ ပြည့်သယောင် ထင်ရတဲ့ ငွေတအုပ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အသိတယောက်က သူခံခဲ့ရတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်သရုပ်ပြတာကို ရေးလိုက်တာပါ။
တခြားနည်းတွေ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရဲ့ အထင်ကရမြို့လည်ခေါင်
ဆိုတာ လူလိမ်လူကောက် တွေ ကျက်စားဖို့ နေရာလိုဖြစ်နေတာတော့
လက်ကျောမတင်းတဲ့ ကလိန်ခြုံတွေရော .. ခြစားနေတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ပါ
အဲဒါက အပြင်ဘက်မှာဖြစ်တာပါ….။ နိုင်ငံတော်က တရားဝင်ဖွင့်ထားတဲ့ ဘဏ်မှာတောင် ညံ့တဲ့သူခံလိုက်ရသေးတာပဲ…။ ခွေလက်ခံကောင်တာရဲ့ ခုံမှာ အပေါက်သေးသေးရှည်ရှည်လေး ဆွဲထားတယ်လေ….။ အကြောင်းမသိရင်တော့ ဆက်ကြောင်းလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့….။ ငွေလာသွင်းရင် ငွေစက္ကူတွေကို သားရေကွင်း ဖြည်ပြီးခါတယ် ညီအောင် ခုံပေါ်ကို ခေါက်ပြီး ဆောင့်တယ်…။ ကျသွားပြီလေ…။ ခုဏက အပေါက်သေးသေးလေးကနေ ရွက်ရေ တစ်ရာဆိုရင် တစ်ချက်ဆောင့်တစ်ရွက် …။ သုံးချက်လောက်ဆောင့်ရင် သုံးရွက်လောက် …။ အဲဒါ လေးဆယ်ငါးကျပ်တန်…။ ကိုးဆယ်တန်ခေတ်ကပါ…။ နောက် လူပြောများလာတော့ အဲခုံတွေပေါ်ကို မှန်ချပ်တွေ ပြန်ချပေးထားလို့ နို့မို့ဆိုရင်………… အရင်တုန်းကပြောတာပါ…။ လူတွေကကို စာရိတ္တ ဆင်းရဲနေတာ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး…။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ ၀င်ငွေနဲ့ မလောက်ရင် အငတ်ခံနေမယ် ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး …။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရ ကိုယ့်အတွက်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ် …။ ကြီးကြီး လတ်လတ် ငယ်ငယ် အတူတူ ပဲ ခိုးလို့ရတဲ့သူက ပိုခိုးချင်တယ် …။ ခိုးခွင့် လုံးဝမရတဲ့သူက ဗြောင်တောင်းစားမယ်…။
ကျန်တဲ့ တရားသောနည်းလမ်းနဲ့ ၀င်ငွေရဖို့ မတွေးဖူး မကြံဆဘူး…။ တစ်ယောက်က ဒီနားက ခိုးလို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်က လိုက်ပြီးခိုးဖို့ ၀န်မလေးဘူး …။ တစ်ယောက်က ဒီနားကတောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင် နောက်က တစ်သီတစ်တန်းကြီးလိုက်တောင်းကြတော့တာပဲ….။ အစဉ်းစားအဆင်ခြင်နဲတဲ့ သိုးတွေလိုပဲ…။ အဲဒါကြောင့် တစ်ချိန်က ကဗျာဆရာ မောင်လေးအောင်က ” သိုးတွေက ကဗျာ မရေးဘူး”လို့ ပြောခဲ့တာ………။
သြရတို့တော့ အဲ့နားသွားရင် အမေးခံရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူနေတာဗျို့၊ သူတို့က တော့ ခိုးလာလဲ တယ်ထင်လို့ မေးလားတော့ သိပါဘူး၊ ခပ်တည်တည်ပဲ မလဲဘူး၊ အထာကြီးနဲ့ ခေါင်းခါပြ၊ မိုက်တယ်ဗျ။ နောက်ပြီး အဲ့ကောင်တွေက ကုလားများတယ်ဗျ၊ လူမျိုးရေး မပါပါဘူး၊ ပြောပြတာပါ၊ ဒီလိုလုပ်တဲ့ ကောင်တွေ တသက်လုံး လူမွေးလူတောင် ပြောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ၊
၅ရွက်တအုပ်၎ရွက်တအုပ် လုပ်ပြီး အုပ်တဲ့အရွက်အတွင်းဘက်က
သရေပင်မဖြေဘဲနဲ့ ရေကြည့်လိုက်ယင် ၉ရွက်တွေချည်းရေမိလိပ်မယ်…
အနည်းငယ်ပြောပါရစေဦးဗျာ..ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာ နှိုင်ငံခြားငွေလေး..လှဲမယ်..တရားဝင် နေရာတွေမှာမလဲချင်ဘူး.အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့..ဟုတ်ပြီ ဆူးလေ စောရတွေစီမှာ လဲမယ်..ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့သူဆို ကားပါသလား.နယ်ကလူဆို ငွေပမာဏ.နဲသလား.၃…၄..သိန်းဆို…ကျနော်အညာသား ပလက်ဖောင်းပေါ် ငုတ်တုပ်ထိုင် သရေပင်ဖြေပြီး ၁..ရွက်ချင်းရေပါတယ်..ရောင်းတဲ့စောရ ဟာ..အကိုအဲ့လိုရေနေရင် ကြာမယ်ပြောပါတယ်.အိုကေ ဒါဆို ငါကပိုတောင် အချိန်မရလို့ မေ၇ာင်းတော့ဘူးကွာ..ငွေပမာဏများသလား ဆယ်ချီမယ်ဆို ဟိုဖက်လမ်းလေးမှာ လက္ဘရည်ဆိုင်လေး ရှိ့ပါတယ် စောရကို ကို့ရဲ့ငွေပမာဏပြောပြီး ခေါ်ခဲ့ပါ.(ကားပါရင် ကားပေါ်ခေါ်လိုက်ပါ.)..သရေပင်လေး ဖြုတ်ရေရတာ သိက္ခာကျသလားဗျာ..၉၆ ကတည်းက မြန်မာအလည်ပြန်တိုင်း ကျနော်အညာသားဆူးလေစောရတွေစီမှာ ငွေထုပ်ကို သရေပင်မဖြေပဲ တစ်ခါမှ့ မရေခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ.သူတို့ကတော့ တွေးမှာပါ..အတော်ပိန်းတဲ့ကောင် နှိုင်ငံခြားကပြန်လာတယ်လည်းပြောသေး..ငွေထုတ်ကို အထုပ်လိုက်မရေဘူး..သရေဖြေပြီးရေတွက်တယ်.ဆိုပဲဗျ(ယခု့လောလော ဆယ်နေသော နှိုင်ငံရှိ့ လမ်းဘေးငွေထုတ်စက်လေးတွေမှာတော့ ငွေထုတ်ပြီးပြီးခြင်း ကိုယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ငွေပမာဏ ပြည့်မပြည့် မရေတွက်ရဲပါခင်ဗျာ..) ၄..လပိုင်း အလည်ပြန်တဲ့အချိန် ဆူးလေစောရတို့စီ ငွေရောင်းဖြစ်ရင်တော့ ပလက်ဖောင်းပေါ်ပုဆိုးကတောင်းကြိုက် (အိုပါး..စောင့်ကြောင့်ထိုင်) ပြီး ငွေထုပ် သရေပင်ဖြုတ်လို့ ၁ ..ရွက်ခြင်းရေပါဦးမည်..ငွေပမာဏများရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ငွေရေတွက်ခိုင်းပြီး ဘီယာတိုက်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်.အထုပ်မဖြေပဲ ရေမယ်ဆိုရင်တော့ လွမ်းခြင်းလွမ်း ကိုယ်တိုင်ပဲ လွမ်းရမယ်ဗျိုး..လိမ်တာ သူတို့အလုပ်ပါ ..ဒါပေ့မယ့်သူတို့ စီရောင်းရတာ တရားဝင် နေရာတွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်..ဟိုနေရာတွေက တရားဝင် ဆိုပြီး ကိုယ့်ချွေးနှဲစာလေး ကိုယ်ရှာပြီးလာရောင်းတာကို တောင် သူခိုးကြည့်ကြည့်ပါတယ်.ဟိုစာအုပ်တောင်း ဒီစာရွက်တောင်းတောင်းပါတယ်.ဆူးလေစောရတွေကလည်း သူခိုးကြည့်ကြည့်တာပဲဆိုတော့ တူတူပါပဲဗျာ.
တစ်လောက မတော်တဆဂျောက်ကျပြီး ခြင်္သေ့ကျွန်းခဏသွားဘို့ မဲကျမယ်ထင်လို့
ပန်းဆိုးတန်းက အထင်ကရဟဲဗီးဘဏ်ကြီးမှာ စလုံးသုံးထောင်လောက် သွားဝယ်တော့
၆မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ သီလရှင်လောင်းဖို့လို့ ဘုပြောပြီးထွက်ခဲ့တယ်…။
ဘုပြောလိုက်တော့ အဲဒီကောင်တာကအမျိုးသမီး မျက်နှာပျက်ပြီး တဖက်လှည့်သွားတာနဲ့
လုပ်ပေးဘို့ ၀တ္တရားရှိတဲ့ ပုံမှန်အလုပ်လေးကိုတောင် ထင်ရာမြင်ရာ supporting documents တွေ လျှောက်လျှောက်တောင်းတာ ဒီနိုင်ငံမှာ အကျင့်ကို ဖြစ်နေပြီ။
အဲဒါတောင် ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းနော်…။
တိုင်ပြည်ဂျီးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား သိန်းကျော်ရှိလျက်နဲ့ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်နေတုံးပဲလားဗျ…..
ဦးကြောင် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား သိန်းကျော်ရှိလို့ လားဗျ…………
ရန်ကုန်လိုမြို့ ကြီးတောင် သောင်းဂဏန်းပြည့်ပြည့်လေးပဲရှိတာနော်……